Vitamin D လျော့နည်းလာရင် ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲ - Hintharmedia
Vitamin D လျော့နည်းလာရင် ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲ
Vitamin D ဆိုတာ သဘာဝကနေတဆင့် အရေပြားကလက်ခံပေးတဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ကြာကြာနေပေးတဲ့အခါ Vitamin D ကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ နေရောင်ခြည်က ရရှိတဲ့ Vitamin D လျော့နည်းခြင်းဟာ ဖြစ်နေကျ ပြသနာတစ်ခုဆိုတာ အံ့သြစရာ တွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာဆိုရင် US က အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ 41% ဟာ သွေးထဲမှာ vitamin D မလုံလောက်ကြဘူး လို့ သိရပါတယ်။
Vitamin D က တခြား vitamin တွေလို မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဟော်မုန်းလို တည်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် အဓိက အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ vitamin D ပြည့်ဝစွာ ရှိနေရင် နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ ကင်ဆာဝေဒနာအချို့ကို မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ vitamin D လျော့နည်းနေရင်တော့ အောက်ပါ ရောဂါဝေဒနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ၆ မျိုးပါပဲ။
Vitamin D ဟာ ရောဂါကာကွယ်ပေးဖို့ အဓိက လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် vitamin D လျော့နည်းလာရင် ကူးစက်ရောဂါနဲ့ ဖျားနာခြင်းတွေ အရင်ဦးဆုံး ခံစားရမှာပါ။ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်းတွေ၊ အဆုတ်ယောင်ခြင်းတွေဟာ Vitamin D လျော့နည်းတဲ့အခါ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. စိတ်အားငယ်၊ ဝမ်းနည်းတတ်ခြင်း။
Depression ဝင်တာဟာလည်း Vitamin D လျော့နည်းခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်အားငယ်ခြင်းက လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သိပ္ပံအထောက်အထားတွေအရ လူကြီးတွေမှာ vitamin D လျော့နည်းမှုကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ အဖြစ်များတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ ဆောင်းရာသီမှာ နေရောင်ခြည်ရရှိမှု နည်းတာကြောင့် Vitamin D လျော့နည်းလာပြီး depression ဝင်လာတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိပ်ရေးဝပေမယ့် နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့မှု နည်းပါးရင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း Vitamin D လျော့နည်းခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ရပ်ပါပဲ။
၄. အရိုးအကြောနှင့် ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း။
Vitamin D ဟာ calcium ဓာတ်ကို စုပ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့် အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Vitamin D ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ကျောရိုးတစ်လျှောက်နာကျင်ခြင်း ဝေဒနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး ၉၀၀၀ ကျော် ကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါ Vitamin D levels လျော့နည်းတာကြောင့် အရိုးအကြောနဲ့ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း ရောဂါဝေဒနာတွေ ခံစားနေရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ အရိုးအားနည်းခြင်းနဲ့ အရိုးပျော့ခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ထက် ဆံပင်ကျွတ်တာများနေပြီဆိုရင်တော့ Vitamin D လျော့နည်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒဏ်ရာတွေ၊ အတွင်းကြေထိခိုက်ထားတာတွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အညိုအမဲကွက်တွေ တော်ရုံနဲ့ မပျောက်နိုင်တာဟာ vitamin D လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ Vitamin D ဟာ အရည်ပြားအသစ်ပြန်လည် ဖြစ်လာစေဖို့ အားဖြည့်ပေးတဲ့အရာ တစ်ခုလု့ိ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် Vitamin D ပြည့်ဝတဲ့အခါ အရည်ပြားမှာ ဖူးယောင်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း နဲ့ အညိုအမဲ စွဲခြင်းတွေကို လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါးကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးHappy December, Sweet December